ဒူဒူကြီး: သဘေ်ာက Electric Motor Starter များ - အပိုင်း (၁)
Electric motor တွေကို Type of operation, Type of current, Type of speed နဲ့ Type of structural features ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ခွဲခြားကြပါတယ်။ type of operation အရခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ synchronous motors အုပ်စုနဲ့ asynchronous motors အုပ်စုဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ Synchronous Motors အုပ်စုမှာ plain motor နဲ့ super motor တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Asynchronous Motors အုပ်စု မှာတော့ induction motors တွေနဲ့ commutator motors များပါဝင်ပါတယ်။
တခါ induction motors တွေကို၊ squirrel cage induction motor နဲ့ wound rotor induction motor တွေအဖြစ် ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ commutator motors တွေကိုလည်း၊ series motor, compensated motor, shunt motor, repulsion motor, repulsion-start induction motor နဲ့ repulsion induction motor တွေအဖြစ်ထပ်မံ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Type of current အရခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ single phase motor တွေနဲ့ three phase motor တွေ လို့၊ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Type of speed အရ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ constant speed motor, variable speed motor နဲ့ adjustable speed motor တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Type of Structural Features အရခွဲခြားကြည့်ရင်တော့၊ open type motor, enclosed type motor, semi-enclosed type motor, ventilated type motor, pipe-ventilated type motor, riveted frame-eye type motor အစရှိသလိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ asynchronous motors အုပ်စုမှ induction motors တွေ ဖြစ်တဲ့၊ squirrel cage induction motor နဲ့ wound rotor induction motor တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။
squirrel cage induction motor တွေမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ starting method သို့မဟုတ် starter တွေ ကတော့ (၁)။ DOL direct on line starting method (၂)။ forward/ reverse starting method (၃)။ pole changing starting method (၄)။ forward/ reverse & pole changing starting method (၅)။ star/ delta starting method (၆)။ primary resistors starting method နဲ့ (၇)။ auto transformer starting method တို့ဖြစ်ပါတယ်။ squirrel cage induction motor တွေရဲ့ speed ကို၊ (၁)။ changing applied voltage (၂)။ changing applied frequency နဲ့ (၃)။ changing number of stator poles စတဲ့ နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပြီးအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပါတယ်။
wound rotor induction motor တွေမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ starting method ကတော့၊ secondary resistors (or rheostat) starting method သို့မဟုတ် rotor resistance starting method ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. DOL starter
AC induction motor တွေကိုများသောအားဖြင့် DOL starter ဆိုတဲ့ direct on line starting method နဲ့ စတင်မောင်းနှင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ AC induction motor တွေကို DOL starter နဲ့ "စ" မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ starting current surge နဲ့ line voltage drop ကိုဖြစ်ပေါါစေပါ တယ်။ starting current surge ကိုလျှော့ချဖို့စတင်နှိုးချိန်မှာ voltage ကို reduce လျှော့ချပြီး၊ rated RPM နီးပါး ရောက် လာချိန်မှာ full supply voltage ပြန်ပေးကာ မောင်းနှင်စေပါတယ်။
line voltage drop ကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ star/ delta starting method, primary resistors starting method, auto transformer starting method အစရှိတာတွေကို အသုံးပြုပြီး၊ starting current ကိုလျှော့ချ နိုင်ဖို့ secondary resistors (or rheostat) method သို့မဟုတ် rotor resistance starting method တို့ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
22 KW အောက် electric motor တွေကို DOL starter နဲ့မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ staring current ဟာ load current ထက် (၈) ဆခန့်ပိုများပါတယ်။ AC induction motor တွေမှာ stator winding ကို၊ star connection အနေနဲ့ မဆက်သွယ်ပဲ delta connection နဲ့ ဆက်သွယ်မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ motor ရဲ့ output power (၃) ဆခန့် ပိုရလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် delta connection နဲ့ မောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ star connection ထက် (၁/၃) အဆခန့် line current ကိုပိုဆွဲယူပါတယ်။
Fig. star/ delta starter
22 KW အထက် induction motor တွေကို၊ စတင်မောင်းနှင်တဲ့အခါ starting current surge နဲ့ line voltage drop ကိုလျှော့ချဖို့ star connection နဲ့ စတင်နှိုးပြီး၊ rated RPM နီးပါးရောက်လာချိန်မှာ delta connection နဲ့ ဆက်လည်လည်ပတ်စေရန် star/ delta starter တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ star connection မှ၊ delta connection ပြောင်းဖို့အတွက်၊ star delta timer မှ၊ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. star/ delta timer & timer sequence
ဒါပေမယ့် 37 KW အထက် induction motor တွေကိုတော့ auto transformer starting method နဲ့ secondary resistors (or rheostat) starting method သို့မဟုတ် rotor resistance starting method တို့ကို အသုံးပြုမောင်းနှင်လေ့ ရှိပါတယ်။
Fig. auto transformer starter
auto-transformer မှာ motor မောင်းနှင်လည်ပတ်နေစဉ်မှာအသုံးပြုမယ့် rated voltage တန်ဘိုးထက် (၅၀), (၆၀) နဲ့ (၇၀ %) အစရှိသဖြင့်လျှော့ချကာ၊ tapping တွေထုတ်ထားတယ်။ စတင်မောင်းနှင်တဲ့ အခါ motor ရဲ့ stator winding ကို၊ auto-transformer ရဲ့ tapping တွေကနေ supply voltage ပေး ကာ လည်ပတ်စေပါတယ်။ rated voltage တန်ဘိုးထက် (၅၀ %) လျှော့ချထားတဲ့ tapping ကိုအသုံးပြု တဲ့အခါ၊ supply current အနေနဲ့ တဝက်ခန့်သာလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး၊ DOL starter မှာအသုံးပြုတဲ့ starting current နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်(၂၅ %) ခန့်သာ ပိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် starting position ကနေ running position ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ၊ transient current ဖြစ်ပေါါမှုကတော့ DOL starter ထက် များပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:03